Thayipha isifo sikashukela sokuqala > Ukuxilonga
Isifo sikashukela sohlobo loku-1 sivame ukukhula esemncane, kodwa futhi siyenzeka kubantu abavuthiwe. Lesi sifo sivezwa iqiniso lokuthi, ngenxa yezizathu ezingaziwa kuze kube sekupheleni, amaseli β-amaseli wamanyikwe abhekene nokukhiqizwa kwe-insulin aqala phansi. Ngenxa yokushoda noma ukuntuleka kwe-insulin, i-metabolism iyaphazamiseka, ngokuyinhloko i-carbohydrate. Ukuhlanganiswa kwamafutha namaprotheni kunciphisa ngokwenyuka kwamazinga kashukela egazini.
Lapho wonke amaseli e-β ebhujiswa ngokuphelele futhi ukukhiqizwa kwe-insulin kuyeka, izimpawu zesifo ziyavela. Uhlobo 1 sikashukela, okuyisifo esingamahlalakhona, kudinga ukuphathwa kwe-insulin nsuku zonke. Ukufakwa kwaleli hormone kuyindlela kuphela yokulwa nalesi sifo kuze kube manje.
Ukuthuthuka okusheshayo kwalesi sifo yikho okwehlukanisa isifo sikashukela sohlobo 1. Izimpawu ezibonakala ngokuyinhloko - ukoma kakhulu, umlomo owomile, ukuchama ngokweqile nokuvama, ubuthakathaka, ukukhathala okusheshayo, ukwehla kwesisindo ngokuzumayo ngenhliziyo ephezulu.
Uma ungaqali ukuphatha i-insulin ngesikhathi esifanele, i-ketoacidosis yesifo sikashukela iyaqala - isimo esibuhlungu esibonisa ubuthakathaka obujwayelekile, ukuphefumula okusheshayo nobunzima, izinhlungu zemisipha, i-tachycardia, ikhanda, umfutho wegazi ophansi, ukubukeka kwephunga le-acetone, ubuhlungu besisu nokuhlanza. Uma lesi simo singasuswa, kuvela ikhefu lesifo sikashukela, okuyizimpawu zazo yilezi: ukuphefumula okunomsindo, ukugabha okwandayo, ulwelwesi lwamafinyila nesikhumba, ukuvuvukala kwesifo sikashukela, ukuncipha kwezicubu zomzimba, ukuqina kwemizwa, ukulahlekelwa ukwazi. Ukusuka kuzimpawu zokuqala zesifo kuya ekubeni ukoma, kungathatha amasonto amabili kuya ezinyangeni ezimbalwa. Kwenzeka ukuthi i-ketoacidosis ne-coma zikhula ngokushesha ngokumelene nesizinda sokucindezela okukhulu, izifo, ukuhlinzwa, ukulimala.
Kwezinye izimo, isifo sikashukela sohlobo loku-1 asinalo udlame kakhulu, futhi izimpawu zalo eziphambili, ezinjengokoma kanye nokunciphisa isisindo, azikhulunywa kangako. Iziguli, njengomthetho, zikhononda ngokukhathala, i-malaise, isikhumba esihehayo kanye nomsebenzi wobulili ongalungisiwe.
Izinga lokufa kwama-β-cell kuzo zonke iziguli lihlukile. Ikakhulu uhlobo lukashukela olukhula ngokushesha ikakhulukazi ezinganeni. Ebantwini abavuthiwe, inqubo ingahamba kancane, futhi umkhiqizo osele we-insulin ungaqhubeka isikhathi eside.
Isifo sikashukela sohlobo 1 siyingozi ezinkingeni zayo ezibangelwa ukuphazamiseka kwemithambo yegazi. Imvamisa, isifo sikashukela siba ubumpumputhe, ukungasebenzi kahle kwezinso, isifo sezinyawo, okuholela ekunqunyweni.
Kunombono phakathi kwalomuntu othi isifo sikashukela senzeka ngenxa yokuhlukunyezwa kwamaswidi, okungelona iqiniso.
Imbangela yesifo sikashukela sohlobo loku-1 kungukuqedwa kokukhiqizwa kwe-insulin ngenxa yokubhujiswa kwamasosha omzimba amangqamuzana esiwenza. Isizathu esiqondile sokuthi amasosha omzimba abone ama-β-cell njengakwamanye amazwe futhi akhiqiza amasosha omzimba awabhubhisayo awasungulwa.
Kucatshangwa ukuthi inqubo ye-autoimmune yokubhujiswa kwamaseli iqala ngaphansi kwethonya lezinto zangaphandle njengokuxineka noma ukutheleleka ngegciwane: isimungumungwane, irabella, inkukhu, kanye nokumbuna. Kulokhu, ukuba khona kokwenzeka kofuzo kuyaphawulwa. Njengomthetho, zonke iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 zinesihlobo esiphethe lesi sifo.
Thayipha ukwelashwa kwesifo sikashukela 1
Lapho nje isiguli sizwa ngokuxilongwa kwaso, kufanele siqale ukuphatha i-insulin ngokushesha. Ngenxa yokuhlelwa kahle nangesikhathi esifanele kwe-insulin yokwelapha, iziguli eziningi ziyakwazi ukuthuthukisa isimo sazo, zigcine lesi sifo zilawulwa, zivinjelwe noma zibambezele ukuqala kwezinkinga futhi ziphila ngendlela ejwayelekile.
Ukudla nokuzivocavoca ngaphezu kokulashwa kwe-insulin. Ngokulashwa okubuyiselwe esikhundleni, lapho umzimba uthola inani elifanele le-insulin, imikhawulo yokudla ekhethekile ayidingeki. Ukuzivocavoca kanye nemidlalo yesifo sikashukela akugcini ngokuphula umthetho kuphela, kodwa futhi kuyadingeka, into esemqoka ukubala imithwalo ngokufanele futhi ungafaki ezemidlalo ezinjenge-scuba diving, ukukhuphuka izintaba, parachuting, isivunguvungu somoya, isisindo.
Yini engenza ukukhiqizwa kwe-insulin kuyeke? Yize abantu bebelokhu becwaninga isifo sikashukela iminyaka engaphezu kuka-2 000, i-etiology, okungukuthi, imbangela yalesi sifo, ayizange inqunywe ngokuthembekile. Kuliqiniso, kunemibono ehlukahlukene ngale ndaba.
Okokuqala, sekuyisikhathi eside kusungulwa ukuthi izimo eziningi zesifo sikashukela sohlobo 1 zibangelwa izinqubo ze-autoimmune. Lokhu kusho ukuthi amaseli e-pancreatic ahlaselwa amaseli abo omzimba futhi abhujiswa njengomphumela. Kunezinguqulo ezimbili eziphambili zokuthi kungani lokhu kwenzeka. Ngokusho kokuqala, ngenxa yokwephulwa kwesithiyo segazi-ubuchopho, ama-lymphocyte, okuthiwa abasizi be-T, axhumana namaphrotheni amaseli wezinzwa. Ngenxa yokungasebenzi kahle ohlelweni lokuqashelwa kwamaprotheni angaphandle, abasizi be-T baqala ukubona la maprotheni njengamaphrotheni we-ejenti yakwamanye amazwe. Ngenxa yokuvela ngeshwa, amaseli we-pancreatic beta nawo anamaprotheni afanayo. Amasosha omzimba aphendukisa "intukuthelo" yakhe kumaseli wamanyikwe, bese ngesikhashana nje ewabulala.
Umbono we-Viral uvame ukunikeza incazelo elula yezizathu zokuthi kungani ama-lymphocyte ahlasela amaseli we-beta - imiphumela yamagciwane. Amagciwane amaningi angangena kumanyikwe, njengama-rubella virus kanye nama-Enteroviruses (ama-Coxsackie virus). Ngemuva kokuthi igciwane lizinze esitokisini se-beta se-pancreas, ingqamuzana ngokwalo liba isisulu sama-lymphocyte bese liyabhujiswa.
Mhlawumbe kwezinye izimo zohlobo lwe-1 yesifo sikashukela kunendlela eyodwa yokwenziwa kwalesi sifo, kwezinye izimo enye, futhi mhlawumbe bobabili bayasiza. Kepha imvamisa imbangela yalesi sifo ayikwazi ukusungula.
Ngaphezu kwalokho ososayensi bathole ukuthi isifo sikashukela kwesinye isikhathi sibangelwa yizakhi zofuzo, nazo eziba nomthelela ekuqaleni kwalesi sifo. Yize into eyenzelwa ifa esimweni sesifo sikashukela sohlobo 1 ayicacanga njengasesimweni sikashukela sohlobo 2. Kodwa-ke, kutholakale izinhlobo zofuzo zomonakalo wazo ongavusa ukukhula kwesifo sikashukela sohlobo 1.
Kukhona ezinye izinto ezithanda ukuthuthukiswa kwalesi sifo:
ezinye izifo zohlelo lwe-endocrine,
Kwesinye isikhathi isifo sikashukela esingu-1 sibangelwa umdlavuza we-pancreatic, ubuthi.
Izigaba nokuthuthukiswa kwalesi sifo
Ngokungafani nesifo sikashukela sohlobo 2, esikhula kancane kancane eminyakeni eminingana, thayipha i-1 mellitus yesifo sikashukela idlulela ezingeni elibi kungakapheli inyanga, noma amasonto angama-2 kuya ku-2. Izimpawu zokuqala ezibonisa isifo zivame ukubonakala ngobudlova, kube nzima ukuzikhumbula.
Esikhathini sokuqala kwesifo, lapho amaseli omzimba esanda kuqala ukuhlasela amanyikwe, ngokuvamile azikho izimpawu ezisobala ezigulini. Noma ngabe ama-50% amangqamuzana e-beta ebhujiswa, isiguli kungenzeka sizwe lutho ngaphandle kokuqhamuka kancane. Ukubonakaliswa kwangempela kwalesi sifo nazo zonke izimpawu zaso kwenzeka kuphela lapho cishe ama-90% amaseli ebhujiswa. Ngalesi degree lalesi sifo, akusekho amandla okusindisa amaseli asele, noma ngabe ukwelashwa kuqalwa ngesikhathi.
Isigaba sokugcina salesi sifo ukubhujiswa ngokuphelele kwamaseli akhiqiza i-insulin. Kulesi sigaba, isiguli asisakwazi ukwenza ngaphandle kwemijovo ye-insulin.
Ushukela wohlobo lokuqala lufana kakhulu nezimpawu zalo zokuthi uthayiphe isifo sesi-2. Umehluko kuphela ubukhulu bokubonakaliswa kwabo kanye nobukhali bokuqala kwesifo.
Isibonakaliso esiyinhloko sesifo sikashukela ukuchama ngokushesha, kuhambisane nokoma okungathi sína. Isiguli siphuza amanzi amaningi, kepha kubukeka sengathi amanzi kuye asihambi.
Olunye uphawu olubonakalayo ukwehla kwesisindo ngokuzumayo. Imvamisa, abantu abanomzimba osindayo bahlushwa isifo sikashukela sohlobo 1, kepha ngemuva kokuqala kwalesi sifo, umuntu angalahlekelwa ngamakhilogremu ambalwa.
Ekuqaleni, isifiso sokudla sesiguli siyanda, ngoba amangqamuzana awanawo amandla. Lapho-ke iphango lingancipha, njengoba kukhona ukudakwa komzimba.
Uma isiguli sibhekene nezimpawu ezinjalo, khona-ke kufanele abonane nodokotela ngokushesha.
Ukwanda kweglucose yegazi ibizwa nge- hyperglycemia. I-Hyperglycemia ifaka imiphumela emibi njengokusebenza kokuphazamiseka kwezinso, ubuchopho, izinzwa, ukuqina kanye nemikhumbi emikhulu. Amazinga we-cholesterol yegazi angakhuphuka. Ukwehlulwa kwemikhumbi emincane kuvame ukuholela kwizilonda, i-dermatitis. I-retinopathy ingaqhamuka, iholele ebumpumputhe.
Izinkinga ezinkulu, ezisongela impilo zesifo sikashukela sohlobo 1 zihlanganisa:
I-ketoacidosis yisimo esidalwa ubuthi obunemizimba ye-ketone, ngokuyinhloko i-acetone. Izidumbu zeKetone zenzeka lapho umzimba uqala ukushisa izindawo ezigcina amafutha ukuze kukhishwe amandla emafutheni.
Uma izinkinga zingambulali umuntu, zingamenza akhubazeke. Kodwa-ke, ukuvuvukala kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1 ngaphandle kokulashwa okufanele akulungile. Ukufa kufinyelela ku-100%, kanti isiguli singaphila ngamandla konyaka noma emibili.
Lokhu kuyinkinga eyingozi yesifo sikashukela sohlobo 1. Kuyinto ebonakalayo yeziguli ezilashwa nge-insulin. I-Hypoglycemia yenzeka ngezinga le-glucose ngaphansi kwe-3.3 mmol / L. Kungenzeka lapho kukhona ukwephulwa kohlelo lokudla okunganele, ukuzikhandla ngokweqile noma okungakahlelwanga, noma umthamo ngokweqile we-insulin. I-Hypoglycemia iyingozi yokulahlekelwa ukwazi, ukoma nokufa.
Imvamisa, izinkomba zesifo kunzima ukuzihlanganisa nokunye, ngakho-ke udokotela ezimeni eziningi angalwazi isifo sikashukela kalula. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi kuyenzeka ukudida ushukela wohlobo 1 nomlingani waso - uhlobo 2 sikashukela, okudinga indlela ehluke kakhulu ekwelashweni. Kunezinhlobo ezingafani zomngcele kashukela, ezinesethi yezimpawu zombili zesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela.
Indlela eyinhloko yokuxilonga ukuhlolwa kwegazi kokuqukethwe ushukela. Igazi livame ukuthathwa esiswini esingenalutho ukuze lihlaziywe - kusuka emunweni, noma emvinini. Ukuhlolwa komchamo kokuqukethwe ushukela, ukuhlolwa kokulayisha ushukela, nokuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycated Ukubona isimo se-pancreas, kuhlaziywa i-C-peptide.
Kunezinhlobo eziningi ze-insulin, ngokuya ngejubane lesenzo - elifushane, le-ultrashort, eliphakathi nendawo nelide. I-insulin nayo iyahlukahluka ngemvelaphi. Phambilini, ama-insulin atholakala ikakhulukazi ezilwaneni - izinkomo, izingulube. Manje, i-insulin etholwe ngobunjiniyela bezakhi zofuzo isatshalaliswa ikakhulu. Ama-insulin asebenza isikhathi eside kufanele angenwe kabili ngosuku noma kanye ngosuku. Ama-insulin asebenza ngokufushane aphathwa ngokushesha ngaphambi kokudla. Umthamo kufanele uhanjiswe udokotela, ngoba ubalwa ngokuya ngesisindo sesiguli nomsebenzi wakhe womzimba.
I-insulin ifakwa egazini yisiguli uqobo noma umuntu wayo osebenzisa amasirinji noma amapeni. Manje kukhona ubuchwepheshe obuthembisayo - amaphampu we-insulin. Lokhu ukwakhiwa okunamathela emzimbeni wesiguli futhi kusize ukuqeda ukulethwa kwe-insulin ngesandla.
Izinkinga zalesi sifo (i-angiopathy, nephropathy, umfutho wegazi ophezulu, njll.) Zelashwa ngemithi esebenza ngempumelelo yokulwa nalesi sifo.
Okunye ukwelashwa wukudla. Ngenxa yokunikezwa njalo kwe-insulin uma kwenzeka isifo sikashukela sincike ku-insulin, leyo mikhawulo eqinile ayidingeki njengohlobo 2 sikashukela. Kepha lokhu akusho ukuthi isiguli singadla noma yini esifunayo. Inhloso yokudla ukugwema ukuguquguquka okubukhali emazingeni kashukela wegazi (kokubili kuya phezulu naphansi). Kumele kukhunjulwe ukuthi inani lama-carbohydrate angena emzimbeni kumele lihambisane nenani le-insulin egazini futhi linake izinguquko zomsebenzi we-insulin ngokuya ngesikhathi sosuku.
Njengasifo sikashukela sohlobo 2, isiguli kufanele sigweme ukudla okuqukethe ama-carbohydrate asheshayo - ushukela ocolisisiwe, i-confectionery. Inani eliphelele lama-carbohydrate adliwayo kufanele akhishwe ngokuqinile. Ngakolunye uhlangothi, ngesifo sikashukela esincike ku-insulin, kuhlanganiswe nokwelashwa kwe-insulin, awukwazi ukuya ekudleni okudla okweqile kwe-carb, ikakhulukazi ngoba ukunqunyelwa ngokweqile kwe-carbohydrate kwandisa ingozi ye-hypoglycemia - isimo lapho amazinga weglucose egxila ngaphansi kwezinga elisongela impilo.
Ubudlelwano sebusunguliwe phakathi kwalesi sifo kanye nezinhlobo eziningi zofuzo (zombili ezilandayo nezibusayo).
Amathuba okukhula kwesifo sikashukela sohlobo loku-1 sikhuphuka ngo-4-10% (okuhlobene nesilinganiso sabantu) uma omunye wabazali enalesi sifo.
Izici zezemvelo nazo zidlala indima enkulu ku-etiology yesifo sikashukela sohlobo 1.
Amawele omazisi ane-genotypes efanayo ahlushwa isifo sikashukela ngasikhathi sinye emaphathini angama-30-50% kuphela.
Ukudlanga kwalesi sifo kubantu bomjaho waseCaucasus emazweni ehlukene kuyehluka kayishumi. Kuvele ukuthi kubantu abasuka ezindaweni ezinesifo esiphansi soshukela ezindaweni ezinesibalo esikhulu, uhlobo lwe-1 sikashukela luvame kakhulu ukwedlula kulabo abahlala ezweni labo lokuzalwa.
Ukuhlukaniswa kohlobo 1 sikashukela
- Isinxephezelo yisimo sikashukela lapho izinkomba ze-carbohydrate metabolism zisondelene nezisemuntwini ophilile.
- Ukukhokhelwa. Kungenzeka kube neziqephu zesikhashana zesikhashana ze-hyperglycemia noma i-hypoglycemia, ngaphandle kokukhubazeka okukhulu.
- Ukubuyiselwa. Ushukela wegazi uhluka kakhulu, ngezimo ze-hypoglycemic kanye ne-hyperglycemic, kuze kube sekukhuleni kwe-thoroma nethambo. I-acetone (imizimba ye-ketone) ivela kumchamo.
2. Ukuba khona kwezinkinga
-kungelula (inkambo yokuqala noma isifo sikashukela esinxephezelwe kahle, esingenazinkinga, ezichazwe ngezansi),
- Kuyinkimbinkimbi (kunezinkinga ze-vascular kanye / noma ama-neuropathies)
- i-autoimmune (amasosha omzimba athole amaseli)
- I-idiopathic (asikho isizathu esikhonjwe).
Lokhu kuhlukaniswa kubaluleke kakhulu ngokwesayensi, ngoba akunamphumela kumaqhinga okwelashwa.
Izimpawu zohlobo 1 sikashukela:
1. Ukoma (umzimba onoshukela wegazi ophakeme udinga "i-dilution" yegazi, wehlise i-glycemia, lokhu kutholakala ngokuphuza kakhulu, lokhu kubizwa nge-polydipsia).
2. Ukuchama okuningana futhi okuhlala kwenzeka, ukuchama ebusuku (ukuthola umthamo omkhulu wamanzi, kanye nezinga eliphakeme le-glucose kumchamo kunomthelela wokuchama ngamanani amakhulu, angajwayelekile, lokhu kubizwa ngokuthi yi-polyuria).
3. Isifiso esandayo sokudla (ungakhohlwa ukuthi amaseli omzimba abulawa yindlala yingakho esayina izidingo zawo).
4. Ukwehla kwesisindo (amaseli, ukungatholi i-carbohydrate yamandla, aqale ukudla ngezindleko zamafutha namaprotheni, ngokulandelana, akukho okushiwoyo okwenzelwe ukwakha nokuvuselela izicubu, umuntu alahlekelwa isisindo ngokudla okwandayo nokoma).
5. Izikhumba nezikhumba ze-mucous zomile, izikhalazo zivame ukwenziwa “ngokomiswa emlonyeni”.
6.Isimo esijwayelekile esinomthamo wokusebenza oncishisiwe, ubuthakathaka, ukukhathala, izicubu kanye nekhanda (futhi ngenxa yendlala yamandla awo wonke amaseli).
7. Ukuhlaselwa kokujuluka, isikhumba esidlekayo (kwabesifazane, ukulunywa yiziqubo esikhathini esiningi kwesinye isikhathi kuvela okokuqala).
8. Ukumelana okuphansi kokutheleleka (ukwanda kwezifo ezingamahlalakhona, njenge-tonsillitis engapheli, ukubukeka kwe-thrush, ukuthambekela kokutheleleka ngegciwane).
9. Isicanucanu, ukuhlanza, Ubuhlungu besisu esifundeni se-epigastric (ngaphansi kwesisu).
10. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuvela kwezinkinga: ukubuka okunciphisiwe, ukungasebenzi kahle kwezinso, ukungondleki kahle nokunikezwa kwegazi emaphethelweni aphansi, ukuphazamiseka kwemoto nokuphazamiseka kwemizwa kwezingalo, kanye nokwenziwa kwe-autonomic polyneuropathy.
Isifo Angiopathies yesifo sikashukela
Njengoba sekushiwo, ukugcwala okukhulu kweglucose yegazi kulimaza udonga lwe-vascular, okubandakanya ukuthuthukiswa kwe-microangiopathy (ukulimala kwemikhumbi emincane) kanye ne-macroangiopathy (ukulimala kwemithambo emikhulu).
Ama-Microangiopathies afaka i-retinopathy (ukulimaza kwemithambo emincane yamehlo), i-nephropathy (ukulimala kwemithambo yethambo yezinso), kanye nomonakalo wemikhumbi emincane yezinye izitho. Izimpawu zemitholampilo ze-microangiopathy zivela phakathi kweminyaka eyi-10 ne-15 yohlobo lwe-1 yesifo sikashukela, kepha kungahle kube nokuphambuka kwezibalo. Uma isifo sikashukela sinxephezelwa kahle futhi kwenziwa ukwelashwa okwengeziwe okufika ngesikhathi, khona-ke ukuthuthukiswa kwale nkinga “kungahlehliswa” isikhathi esingapheli. Kukhona futhi izimo zokukhula kakhulu kwe-microangiopathy, esevele emva kweminyaka emi-2 kuya kwengama-3 ukusuka ekuhlaselweni kwesifo.
Ezigulini ezisencane, ukulimala kwemithambo “kungokwesifo sikashukela,” futhi esizukulwaneni esidala kuhlanganiswa ne-vasher atherosulinosis, ekwenza kube nzima ukwanda kwesifo kanye nenkambo yalesi sifo.
I-morphologically, i-microangiopathy iyi-lesion eminingi yemikhumbi emincane kuzo zonke izitho nezicubu. Udonga lwe-vascular thickens, hyaline deposits (high-density protein protein) futhi lumelana namathonya ahlukahlukene) luyavela kuso. Ngenxa yalokhu, imikhumbi ilahlekelwa yimvume yayo evamile nokuguquguquka, izakhi zomzimba kanye nomoya-mpilo akungena phakathi kwezicubu, izicubu ziyaphela futhi zinenkinga yokuntuleka komoya-mpilo kanye nokudla okunempilo. Ngaphezu kwalokho, imikhumbi ethintekile iba sengozini futhi ibe ntekenteke. Izitho eziningi zithintekile, njengoba sekushiwo, kepha okubaluleke kakhulu ukulimala izinso nasethweni.
I-nephropathy yesifo sikashukela iwumonakalo othize emithanjeni yezinso, okuthi, yathuthuka, iholele ekuthuthukiseni ukwehluleka kwezinso.
I-retinopathy yesifo sikashukela - Lokhu kungukulimala kwemikhumbi ye-retina yeso, ebonwa kuma-90% eziguli ezinesifo sikashukela. Lokhu kuyinkimbinkimbi nokukhubazeka okuphezulu kweziguli. Ubumpumputhe bukhula kaningi ukwedlula inani labantu. Kusukela ngo-1992, ukuhlukaniswa kwe-retinopathy yesifo sikashukela kuye kwamukelwa:
- non-proliferative (i-retinopathy I yesifo sikashukela): izindawo ezinokwehla kwesibindi, ukugxila okuxakile ku-retina, edema eceleni kwemikhumbi emikhulu nasendaweni yendawo ye-opic.
- I-retrolopathy ye-prrolopative (isifo sikashukela i-retinopathy II): ukungathandeki kwe-venous (ukuqina, ukuqina, ukuhlukahluka emgodini wemithambo yegazi), inani elikhulu le-exudates eqinile, ukuphuma kwegazi okuningi.
- proliferative retinopathy (sikashukela retinopathy III): ukuhluma kwe-opic nerve disc (i-optic disc) nezinye izingxenye ze-retina ngemikhumbi esanda kwakhiwa, i-hemorrhage emzimbeni we-vitreous. Imikhumbi emisha eyakhiwe ayiphelele ngesakhiwo, inentekenteke kakhulu futhi ngokuqina okuphindaphindiwe kunengozi enkulu yokuqunjelwa i-retinal.
I-Macroangiopathies ifaka phakathi ukulimaza emaphethelweni aphansi kuze kube sekukhulekeni konyawo lwesifo sikashukela (ukulimala kwonyawo oluthile ku-mellitus yesifo sikashukela, ebonakala ngokwakhiwa kwezilonda kanye nokuphazamiseka kokujikeleza kwegazi okubulalayo).
I-Macroangiopathy kushukela ikhula kancane, kepha kancane kancane. Ekuqaleni, isiguli sikhathazeka ngokweqile ngokuqina kokukhathala kwemisipha, ukubanda kwamalungu, ukhubazeka nokuncipha kokuzwela kwezitho, ukukhuphuka kokujuluka. Lapho-ke, sekuphawuliwe ukupholile kanye nobunzima bezitho zomzimba kuphawuliwe, ukulimala kwezipikili kuyabonakala (ukungondleki ngokufakwa kwegciwane kanye nokutheleleka ngefungus). Ubuhlungu bemisipha obungavinjelwanga, ukusebenza ngokuhlanganyela okungahambi kahle, izinhlungu zokuhamba, ukuzilimaza nokukhalinyelwa kwesinye isikhathi kuyaphazamisa lapho isimo siqhubeka. Lokhu kubizwa ngokuthi unyawo lwesifo sikashukela. Ukwelashwa okunekhono kuphela nokuziqapha ngokucophelela okungabambezela le nqubo.
Kunama-degree amaningi e-macroangiopathy:
Izinga 0: akukho monakalo esikhunjeni.
Ileveli yoku-1: amaphutha amancane esikhunjeni, asendaweni eyakhiwe, awunawo amandla okuphendula okuvuvukala.
Izinga 2: izilonda zesikhumba ezijulile, kukhona ukusabela kokuvuvukala. Ukuthambekela ekuqhubekeni kwesigaba ngokujula.
Izinga 3: izilonda zesikhumba esibuhlungu, ukuphazamiseka okukhulu kwe-trophic emilenzeni yemikhawulo engezansi, leli zinga lezinkinga liqhubeka nokuvela okukhulu kokuvuvukala, ngokungezwa kwezifo, i-edema, ukwakheka kwama-abscesses kanye ne-foci ye-osteomyelitis.
Izinga 4: i-gangrene yomunwe owodwa noma amaningana, imvamisa inqubo ayiqhamuki kwiminwe, kepha kusukela onyaweni (imvamisa indawo evezwe ingcindezi iyathinteka, ukujikeleza kwegazi kuyaphazamiseka futhi kwakhiwa isikhungo sokufa kwezicubu, ngokwesibonelo, indawo yesithende).
Izinga 5: i-gangrene ithinta kakhulu izinyawo, noma unyawo ngokuphelele.
Isimo siyinkimbinkimbi yokuthi i-polyneuropathy ikhula cishe ngasikhathi sinye ne-angiopathy. Ngakho-ke, isiguli kwesinye isikhathi asibuzwa ubuhlungu futhi sibongoza udokotela sekwephuzile. Indawo yesilonda yodwa, isithende sinomthelela kulokhu, ngoba akuyona indawo yangasese ebonakalayo (isiguli, njengomthetho, ngeke sihlolisise izinyawo uma singekho ngaphansi kwezinkinga futhi kungekho bunzima).
Isifo sikashukela siphinde sithinte nezinzwa zepherishi, ezibonakaliswa yimithambo yemoto engasebenzi kahle nokuzwa kwemizwa.
Isifo sikashukela i-polyneuropathy ilimaza izinzwa ngenxa yokubhujiswa kolwelwesi lwazo. I-nerve sheath iqukethe i-myelin (isakhi se-multilayer cell equkethe izinto ezinjengamafutha angama-75%, ama-25% amaprotheni), onakaliswa lapho kuvezwa i-glucose ephezulu egazini .. Ngenxa yomonakalo kulwelwesi, kancane kancane nerve ilahlekelwa yikhono layo lokuqhuba umfutho kagesi. Futhi-ke ingafa nhlobo.
Ukuthuthukiswa kanye nobunzima be-polyneuropathy yesifo sikashukela kuncike esikhathini salesi sifo, izinga lesinxephezelo kanye nokuba khona kwezifo ezikhona. Ngokwesifo sikashukela esingaphezu kweminyaka emi-5, i-polyneuropathy yenzeka kuphela kubantu abangu-15%, futhi isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-30, inani leziguli ezine-polyneuropathy lifinyelela ku-90%.
Ngokomtholampilo, i-polyneuropathy ibonakaliswa ukwephula ukuzwela (okushisa nobuhlungu), bese kusebenza kwemoto.
I-Autonomic polyneuropathy - Lokhu kuyinkinga ekhethekile yesifo sikashukela, ebangelwa ukulimala kwezinzwa ezizimele, ezilawula imisebenzi yethambo lenhliziyo, ulwelwesi kanye nolwesisu.
Uma kulimala inhliziyo yesifo sikashukela, isiguli sisongelwa ngokuphazamiseka kwesigqi kanye ne-ischemia (indlala yomoya ophethwe yindlala), ekhula ngokungalindelekile. Futhi, okukubi kakhulu, isiguli kwesinye isikhathi asizizwa sidabukile enhliziyweni, ngoba ukuzwela nakho kukhubazekile. Le nkinga yesifo sikashukela isongela ngokufa okungazelelwe kwenhliziyo, inkambo ebuhlungu yokufakelwa kwe-myocardial, kanye nokuthuthukiswa kwama-arrhythmias abulalayo.
Isifo sikashukela (esibizwa nangokuthi yi-dysmetabolic) ukulimala ohlelweni lokugaya ukudla sivezwa ukungahambi kahle kwamathumbu, ukuhamba kokuqunjelwa, ukuqhakaza, ukuqina kokudla, ukufakwa kwaso kunciphisa, okubuye kuholele ebunzimeni lokulawula ushukela.
Ukulimala kwendlela yokuchama kuholela ekuphazanyisweni kwemisipha ebushelelezi ye-ureters ne-urethra, okuholela ekungeneni kwezifo, izifo ezivame ukwenziwa njalo futhi ukutheleleka kusakazekela phezulu, kuthinta izinso (ngaphezu kwesilonda sikashukela, ukuhlangana kwezitho zomzimba).
Kwabesilisa, ngokumelene nesizinda somlando omude wesifo sikashukela, ukungasebenzi kahle kwe-erectile kungabonakala, kwabesifazane - dyspareunia (ubulili obubuhlungu nobunzima bokungena kwezocansi).
Kuze kube manje, umbuzo wokuthi iyiphi imbangela eyinhloko yomonakalo wezinzwa noma ukulimala kwemithambo awukaxazululwa. Abanye abacwaningi bathi ukuntuleka kwemithambo kuholela ku-nerve ischemia futhi lokhu kuholela ku-polyneuropathy. Enye ingxenye ethi ukwephulwa kokungabikhona kwemithambo yegazi kufaka ukulimala odongeni lwe-vascular. Kungenzeka ukuthi iqiniso likhona phakathi.
I-Coma ene-decompensation yohlobo 1 sikashukela yizinhlobo ezi-4:
- I-hyperglycemic coma (ukulahlekelwa ukwazi lapho ubhekene nesizinda soshukela wegazi okhuphuke kakhulu)
- ketoacidotic coma (coma ngenxa yokuqongelela kwemizimba ye-ketone emzimbeni)
- I-lactacidic coma (ukoma obangelwa ukudakwa komzimba nge-lactate)
- I-hypoglycemic coma (ukhesa ngokumelene nesizinda sokwehla kakhulu ushukela wegazi)
Isimo ngasinye kulezi ezifakwe kuhlu sidinga usizo oluphuthumayo zombili esigabeni sokuzisiza nokuzisiza, kanye nokungenelela kwezokwelapha. Ukwelashwa kwesimo ngasinye kuhlukile futhi kukhethiwe ngokuya ngokuxilongwa, umlando kanye nobucayi besimo. I-prognosis nayo ihlukile ngesimo ngasinye.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 1 ukwethulwa kwe-insulin kusuka ngaphandle, okungukuthi, ukufaka esikhundleni esiphelele i-hormone engakhiqizwa.
Ama-insulins amafushane, ama-ultrashort, isenzo eside nesikhathi eside. Njengomthetho, inhlanganisela yezidakamizwa ezimfishane / ze-Ultra-ezimfushane nezeluliwe / eziphakathi nendawo zisetshenziswa Kukhona nezidakamizwa ezihlanganayo (inhlanganisela ye-insulin emfushane nehlala isikhathi eside kusirinji esisodwa).
Izidakamizwa ze-Ultrashort (i-apidra, i-humalog, i-novorapid), ziqala ukusebenza kusuka kumizuzu eyi-1 kuye kwengama-20. Umphumela omkhulu ngemuva kwehora eli-1, isikhathi sesenzo singamahora ama-3 kuye kwangama-5.
Izidakamizwa ezisebenza ngokufishane (i-Insuman, i-Actrapid, i-Humulinregular) ziqala ukusebenza kusuka engxenyeni yehora, umphumela omkhulu ngemuva kwamahora ama-2 - 4, isikhathi sokusebenza amahora angama-6 - 8.
Imithi yesikhathi eside esiphakathi (i-Insuman, Humulin NPH, Insulatard) iqala isenzo sabo ngemuva kwehora elingu-1, umphumela omkhulu wenzeka ngemuva kwamahora ama-4 - 12, ubude besikhathi sokusebenza amahora angama-16 kuya kwangama-24.
Amalungiselelo esenzo (eside) esenziwa (lantus, levemir) asebenza ngendlela efanayo cishe amahora angama-24. Zikhishwa izikhathi ezi-1 noma ezi-2 ngosuku.
Izidakamizwa ezihlanganisiwe (InsumanKombi 25, Mikstard 30, Humulin M3, NovoMiks 30, HumalogMiks 25, HumalogMiks 50) nazo ziphathwa izikhathi ezi-1 noma ezi-2 ngosuku.
Njengomthetho, izinhlobo ezimbili ze-insulin zezikhathi ezahlukahlukene zihlanganiswe kwirejimeni yokwelashwa. Le nhlanganisela yenzelwe ukumboza izidingo eziguqukayo zomzimba ku-insulin phakathi nosuku.
Izidakamizwa ezisebenza isikhathi eside zinikeza indawo yezinga lesisekelo se-insulin yazo, okungukuthi, izinga elivame ukubakhona kubantu ngisho nalapho kungekho ukudla. Ukufakwa kwama-insulin anwetshiwe kwenziwa izikhathi ezi-1 noma ezi-2 ngosuku.
Izidakamizwa ezibamba amafishane zenzelwe ukubhekela isidingo se-insulin ngesikhathi sokudla. Imijovo yenziwa ngokwesilinganiso izikhathi ezi-3 ngosuku, ngaphambi kokudla. Uhlobo ngalunye lwe-insulin lunendlela yalo yokuphatha, ezinye izidakamizwa ziqala ukusebenza ngemuva kwemizuzu engu-5, ezinye ngemuva kwama-30.
Futhi phakathi nosuku kungahle kube nemijovo eyengeziwe ye-insulin efushane (ibizwa nge- “jabs” enkulumweni ejwayelekile). Lesi sidingo sivela lapho kunokudla okungalungile, ukwanda kokuzivocavoca umzimba, noma lapho ukuzithiba kuveza ushukela okhuphukile.
Imijovo yenziwa nge-insulin noma ngepompo. Kunezindawo zemishini ezisebenzisekayo ezihlala zigqokwa emzimbeni ngaphansi kwezingubo, zivivinya igazi bese zifaka umjovo ofanele we-insulin - le yimishini ebizwa ngokuthi "ama-pancreas" okwenziwa.
Ukubalwa kwemithamo kwenziwa udokotela - isazi se-endocrinologist. Ukwethulwa kwalolu hlobo lwezidakamizwa kuyinqubo ebhekene kakhulu, ngoba ukunxeshezelwa okunganele kusongela izinkinga eziningi, futhi ukweqisa kwe-insulin kuholela ekwehleni okubukhali koshukela wegazi, kuze kufike ku-hypoglycemic coma.
Ekwelashweni kwesifo sikashukela, akunakwenzeka ukuthi ungasisho isidlo, ngoba ngaphandle kwemikhawulo yama-carbohydrate ngeke kube nesinxephezelo esanele sesifo, okusho ukuthi kunengozi esheshayo empilweni futhi ukuthuthukiswa kwezinkinga kushesha.
Thayipha ukudla okukashukela oku-1
1. Ukudla okunezithelo, okungenani izikhathi ezi-6 ngosuku. Kabili ngosuku kufanele kube isidlo samaprotheni.
2. Ukuvinjelwa kwama-carbohydrate kuya kumagremu angama-250 ngosuku, ama-carbohydrate alula ngaphandle.
3. Ukudla okwanele kwamaprotheni, amafutha, amavithamini kanye nezinto zomkhondo.
Imikhiqizo enconyiwe: imifino emisha (izaqathe, ama-beet, iklabishi, ukhukhamba, utamatisi), amakhambi amasha (i-dill, iparsley), amasamu (i-lentil, ubhontshisi, uphizi), okusanhlamvu okuphelele (okusanhlamvu, irayisi elinsundu, i-nokunye okufana nokolweni, amabele), amajikijolo nezithelo (hhayi okumnandi, isibonelo, amaplamu, amagilebhisi, ama-apula aluhlaza, ama-gooseberries, ama-currant), isobho semifino, i-okroshka, imikhiqizo yobisi, inyama enamafutha aphansi nenhlanzi, ukudla kwasolwandle (i-shrimp, imbaza), amaqanda (inkukhu, izigwaca), uwoyela we-polyunsaturated (imbewu yethanga notshilanga, iminqumo, uwoyela wama-olivi), amanzi amaminerali, angenakuthunyelwa itiye, umhluzi we-rose rose.
Ngokwesilinganiso esilinganiselwe: izithelo ezomisiwe (ukuzithambisa emanzini imizuzu engama-20 kuye kwengama-30), amajikijolo kusuka amajikijolo nezithelo ezintsha (ezingekho ngaphezu kwendebe engu-1 ngosuku), izithelo ezimnandi namajikijolo (ubhanana, ithini lamapheya, sitrobheli, amapetshisi nabanye, ngobuningi Ucezu olu-1 noma idlanzana lamajikijolo kwimithamo eminingana, okuhlukile kungamagilebhisi, aqukethe ushukela omsulwa futhi ngokushesha andisa ushukela wegazi, ngakho-ke kuyinto engathandeki kakhulu ukuyisebenzisa).
Kuvinjelwe: amaswidi kanye ne-confectionery (amakhekhe, amakhukhi, ama-waffles, amajamu, amaswidi), inyama nenhlanzi enamafutha amaningi, imikhiqizo yobisi enamafutha amaningi, iziphuzo ezinamakhabhoni kanye nama-juices ahlanganisiwe, inyama ebhemiwe, ukudla okusemathinini, ukudla okulula, isinkwa esimhlophe nesinkwa sebhotela imikhiqizo, izifundo zokuqala kumhluzi onamafutha noma ezithosiwe no-ayisikhilimu, ukhilimu omuncu, zonke izinhlobo zotshwala, izinkomishi ezishisayo nezinongo (lwesinaphi, i-horseradish, upelepele obomvu), ketchup, imayonnaise namanye amasosa anosawoti.
Ngisho nokudla okuvunyelwe akumele kusetshenziswe ngokungacabangi. Kudalwe ithebula lamayunithi esinkwa ukwenza uhlelo lokudla okunempilo.
I-Bread Units (XE) luhlobo “lwesilinganiso” sokubalwa kwezimali ze-carbohydrate ezidliwayo. Ezincwadini, kunezinkomba zamayunithi wesitashi, amayunithi e-carbohydrate, amayunithi wokufaka esikhundleni - lokhu kuyafana. I-1 XE cishe amagremu ayi-10 kuye kwayi-12 ama-carbohydrate. I-1 XE iqukethwe engxenyeni yesinkwa enesisindo esingama-25 amagremu (usike ungqimba 1 cm ububanzi kusuka kwesinkwa esivamile bese usisika phakathi, njengoba isinkwa sivame ukusikwa emakamelweni okudlela). Yonke imikhiqizo ye-carbohydrate yeziguli ezinesifo sikashukela ilinganiswa amayunithi wesinkwa, kukhona amatafula akhethekile wokubala (umkhiqizo ngamunye une "isisindo" sakhe ku-XE). I-XE iboniswa emaphaketheni anokudla okukhethekile kwabanesifo sikashukela. Ukubalwa komthamo we-insulin kuya ngesilinganiso se-XE esetshenzisiwe.
Ukuvimbela isifo sikashukela sohlobo 1
Endabeni yesifo sikashukela sohlobo 1, umsebenzi wesiguli ukuvikela izinkinga. Ukubonisana njalo nge-endocrinologist nokubamba iqhaza ezikoleni zeSifo sikashukela kuzokusiza ngalokhu. Isikole sikashukela siwumsebenzi wokufinyelela owenziwa odokotela bezinto ezikhethekile.I-Endocrinologists, odokotela abahlinzayo kanye nabelaphi abafundisayo bafundisa iziguli ukubala amayunithi esinkwa, aziphathe ngokwawo ushukela wegazi, aqaphele ukuwohloka futhi anikeze usizo lokuzisizelela, anakekele imilenze yenu (lokhu kubaluleke kakhulu ekwakhiweni kwe-angiopathy ne-neuropathy) namanye amakhono awusizo.
Uhlobo 1 sikashukela yisifo esiba yindlela yokuphila. Ushintsha indlela ejwayelekile, kepha ayiphazamisi impumelelo yakho nezinhlelo zempilo. Awulinganiselwe emisebenzini yobungcweti, inkululeko yokuhamba nesifiso sokuthola izingane. Abantu abaningi abadumile baphila nesifo sikashukela, phakathi kwabo uSharon Stone, uHolly Bury, umdlali we-hockey uBobby Clark nabanye abaningi. Isihluthulelo sempumelelo ekuziqapheleni wena kanye nokufinyelela kudokotela ngesikhathi. Zinakekele futhi ube nempilo!
Igama elithi "isifo sikashukela" livela olimini lwesiGreek futhi lisho "ukugeleza, ukuphuma", ngakho igama lalesi sifo lichaza esinye sezimpawu zalo eziphambili - i-polyuria, ukumbumbuluzwa kwenqwaba yomchamo. Isifo sikashukela sohlobo loku-1 sibizwa nangokuthi i-autoimmune, i-insulin-incike futhi ulutsha. Lesi sifo singenzeka kunoma yimuphi unyaka, kepha sivame kakhulu ukuzibonisa ezinganeni nasentsheni. Emashumini eminyaka amuva nje, kuye kwaba nokwanda kwezinkomba zezifo eziwubala. Ukudlanga kwazo zonke izinhlobo zesifo sikashukela kungu-1-9%, umehluko wokuxhomekeka kwe-insulin wama-5-10% wamacala. Lesi sigameko sincike kubuhlanga beziguli, obuphakeme kakhulu phakathi kwabantu baseScandinavia.
Izici ezifaka isandla ekuthuthukiseni lesi sifo ziyaqhubeka nokuphenywa. Kuze kube manje, sekutholakele ukuthi uhlobo lwe-1 mellitus yesifo sikashukela luvela ngokuhlanganiswa kokuqagela kokuzalwa kanye nemiphumela emibi yangaphandle. Izimbangela eziningi zomonakalo we-pancreatic, ukukhiqizwa kwe-insulin okuncishisiwe kufaka phakathi:
Isizungu. Ukuthambekela kwesifo sikashukela esincike ku-insulin kudluliselwa emgqeni oqondile - kusuka kubazali kuya ezinganeni. Khomba inhlanganisela eminingana yezakhi zofuzo ezibhekeke kulesi sifo. Zivame kakhulu phakathi kwezakhamizi zaseYurophu naseNyakatho Melika. Lapho kukhona umzali ogulayo, ubungozi enganeni bukhuphuka ngo-4-10% uma uqhathaniswa neningi labantu.
Izici ezingaziwa ezingaphandle. Kunamanye amathonya ezemvelo adala uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1. Leli qiniso liqinisekiswa yiqiniso lokuthi amawele afanayo anezinhlobo ezifanayo zofuzo ayagula ndawonye ngamaphesenti angama-30-50 kuphela. Kutholwe nokuthi abantu abasuka endaweni enesimo esiphansi baye endaweni enesifo esikhulu sofuba kungenzeka ukuthi babe nesifo sikashukela kunalabo abenqabile ukuthutha.
Ukutheleleka ngegciwane Impendulo ye-autoimmune kumaseli we-pancreatic ingadalwa ukutheleleka ngegciwane. Ngokunokwenzeka, imiphumela ye-Coxsackie ne-rubella virus.
Amakhemikhali, imithi. Amaseli we-beta ye-gland ekhiqiza i-insulin angathinteka kwamanye amakhemikhali. Izibonelo zezinhlanganisela ezinjalo yi-rat ushevu ne-streptozocin, umuthi ezigulini ezinomdlavuza.
I-pathology isuselwa ekungeneleleni kokukhiqizwa kwe-insulin yama-hormone kumaseli we-beta kuma-ispanc ama-pancreatic we-Langerhans. Izicubu ezincike kwe-insulin zifaka i-hepatic, i-adipose nomsipha. Ngokwehla kwe-insulin secretion, bayayeka ukuthatha ushukela egazini. Kunesimo se-hyperglycemia - uphawu olubalulekile lwesifo sikashukela. Ukuqina kwegazi, ukuphuma kwegazi ezitsheni kuyaphazamiseka, okubonakaliswa kukhubazeka okubukwayo, izilonda eziwukuphela kwemikhawulo yemikhawulo.
Ukushoda kwe-insulin kuvusa ukuwohloka kwamafutha namaprotheni. Angena egazini bese elungiswa yisibindi kuma-ketones, aba yimithombo yamandla kwezicubu ezinganciki i-insulin, kufaka phakathi izicubu zobuchopho. Lapho ukuhlushwa ushukela wegazi kudlula ku-7-10 mmol / l, enye indlela yokuphuma kwe-glucose ngokusebenzisa izinso isebenza. I-Glucosuria ne-polyuria iyakhula, okuholela engcupheni eyandayo yokuphelelwa ngamandla nokushoda kwe-electrolyte. Ukunxephezela ukulahleka kwamanzi, umuzwa wokoma uyakhuphuka (polydipsia).
Izimpawu eziphambili zomtholampilo zokubonakaliswa kwalesi sifo yi-polyuria, polydipsia kanye nokunciphisa umzimba. Isifiso sokuchama sivama kakhulu, umthamo womchamo wansuku zonke ufinyelela kumalitha angama-3-4, kwesinye isikhathi ubonakala ebusuku ukungabonakali. Iziguli zomile, umlomo owomile, uphuza amalitha amanzi angama-8-10 ngosuku. Ukudla kuyakhuphuka, kepha isisindo somzimba sehla ngamakhilogremu angama-5 kuya kwezinyanga ezi-2,5. Ngaphezu kwalokho, ukuqwasha ebusuku nokuqwasha phakathi nosuku, isiyezi, ukungakhathaleli, nokukhathala kungaphawulwa. Iziguli zizizwa zikhathala njalo, zingawenzi umsebenzi ojwayelekile.
Kukhona ukumiswa kwesikhumba nolwelwesi lwama-mucous, ama-rashes, ulceration. Isimo sezinwele nezinzipho siyanda, amanxeba nezinye izilonda zesikhumba aziphili isikhathi eside. Ukuphazamiseka kokuhamba kwegazi kuma-capillaries nemithambo yegazi ibizwa ngokuthi yi-angiopathy yesifo sikashukela. Ukwehlulwa kwama-capillaries kuboniswa ngokuncipha kombono (isifo sikashukela), isithiyo sokwenza umsebenzi wezinso nge-edema, i-hypertension ye-arterial hypepension (isifo sikashukela). Ngama-macroangiopathy, lapho imithambo nemithambo kuhileleka enqubweni yendlela, isifo sokuqina kwemithambo yemithambo yenhliziyo kanye nemikhawulo ephansi iqala ukuthuthuka, ukukhula kwe-gangrene kukhula.
Engxenyeni yeziguli, kuthathwa izimpawu zokuthi isifo sikashukela sinesifo sikashukela, okungumphumela wokungalingani kwe-electrolyte, ukunikezwa kwegazi okunganele kanye ne-edema yezicubu zezinzwa. Ukuqhutshwa kwemizwa ye-nerve fibsenss, ukukhishwa kuyacasuka. Nge-peropheral neuropathy, iziguli zikhononda ngemizwa evuthayo kanye nobuhlungu emilenzeni, ikakhulukazi ebusuku, umuzwa we "goosebumps", ukuzindla, kanye nokuzwela okwengeziwe kokuthinta. I-Autonomic neuropathy ibonakala ngokungasebenzi kahle kwemisebenzi yezitho zangaphakathi - kunezimpawu zokuphazamiseka kokugaya ukudla, i-paresis ye-bladder, izifo ze-genitourinary, dysfunction ye-erectile, i-angina pectoris. Nge-neuropathy egxile kuyo, izinhlungu zokusungulwa kwasendaweni okuhlukahlukene nokwakha amandla kwakhiwa.
Imizamo yodokotela ihlose ukuqeda ukubonakaliswa komtholampilo kwesifo sikashukela, kanye nokuvikela izingqinamba, ukuqeqesha iziguli ukuze zilondoloze i-standardoglycemia ngokuzimele. Iziguli zihambisana neqembu le-polyprofessional lochwepheshe, elihlanganisa ama-endocrinologists, abezempilo, abaqeqeshi bokuzivocavoca. Ukwelashwa kufaka ukubonisana, ukusetshenziswa kwemithi, izikhathi zokuziqeqesha. Izindlela eziphambili zifaka:
Ukwelashwa kwe-insulin. Ukusetshenziswa kwamalungiselelo we-insulin kuyadingeka ekubuyiselweni kwesilinganiso esiphezulu sokuphazamiseka kwe-metabolic, ukuvimbela isimo se-hyperglycemia. Imijovo ibalulekile. Isikimu sesingeniso sihlanganiswa ngawodwana.
Ukudla Iziguli zikhonjiswa ukudla okune-carb ephansi, kufaka phakathi nokudla kwe-ketogenic (ama-ketones asebenza njengomthombo wamandla esikhundleni se-glucose). Isisekelo sokudla yimifino, inyama, inhlanzi, imikhiqizo yobisi. Ngokwesilinganiso esilinganiselwe, imithombo yama-carbohydrate ayinkimbinkimbi avumelekile - isinkwa esiphelele sokusanhlamvu, okusanhlamvu
Kwenziwe umsebenzi womzimba ngamunye. Ukuzivocavoca umzimba kuyasiza ezigulini eziningi ezingenazo izinkinga ezinzima. Amakilasi akhethwa ngawodwa ngumfundisi wokuzivocavoca wokwelapha, enziwa ngokuhleleka. Uchwepheshe unquma ubude besikhathi nokuqina koqeqesho, kucatshangelwa impilo ejwayelekile yeziguli, izinga lokubuyelwa kwesifo sikashukela. Babelwe ukuhamba njalo, abezemidlalo, ezemidlalo. Imidlalo yamandla, ukugijima kwemashi kuyaphikiswa.
Ukuzilawula. Impumelelo yokwelashwa kokulondolozwa kwesifo sikashukela ixhomeke ezingeni lokugqugquzelwa kweziguli. Emakilasini akhethekile, atshelwa ngezindlela zesifo, ngezindlela zokuthola isinxephezelo, izingqinamba, ukugcizelela ukubaluleka kokuqapha njalo ushukela nokusetshenziswa kwe-insulin. Iziguli zifunda ikhono lokwenza umjovo ngokwazo, zikhethe imikhiqizo yokudla, futhi zenze imenyu.
Ukuvimbela izinkinga. Imithi isetshenziswa ethuthukisa ukusebenza kwe-enzymatic yamaseli e-glandular. Lokhu kufaka phakathi ama-ejenti akhuthaza i-oxygenationation, izidakamizwa ze-immunomodulatory. Ukwelashwa ngesikhathi kwezifo, i-hemodialysis, i-antidote therapy kwenziwa ukuze kuqedwe izakhi ezisheshisa ukukhula kwe-pathology (thiazides, corticosteroids).
Phakathi kokulanywa kokuhlola, ukuthuthukiswa komgomo wokugomela i-BHT-3021 kufanelekile ukuphawula. Ezigulini ezithola imijovo ye-intramuscular amasonto ayi-12, izinga le-C-peptide, umaki womsebenzi weseli we-pancreatic islet. Enye indawo yocwaningo ukuguqulwa kwama-stem cell abe amaseli e-glandular akhiqiza i-insulin. Ukuhlolwa kwamagundane kunikeze umphumela omuhle, kepha ubufakazi bokuphepha kwenqubo buyadingeka ukusebenzisa le ndlela ekuzivivinyweni kwemitholampilo.
Isimo sezulu nokuvikela
Uhlobo oluncike kuyi-insulin yesifo sikashukela yisifo esingamahlalakhona, kepha ukwelashwa okufanelekile kwesondlo kusiza ukugcina izinga lempilo eliphezulu leziguli. Izindlela zokuzivikela azikakenziwa, ngoba izimbangela ngqo zalesi sifo azikacaciswa. Njengamanje, bonke abantu abasengozini bayanconywa ukuthi bahlolwe njalo ngonyaka ukuhlonza lesi sifo. Lesi silinganiso sikuvumela ukuthi unciphise ukwakheka kwe-hyperglycemia ephikelelayo, kunciphisa amathuba okuba nezinkinga.
Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi sesifo esinjalo, abesifazane nabesilisa bavame ukuba nezimo eziyingozi ezidinga ukuhlinzekwa kosizo olufanele ngokushesha. Ngaphandle kwalokho, kuvela izinkinga eziholela ekufeni kwengane noma kumuntu omdala. Lezi zimo zifaka i-hyperglycemia, ebonakala ngokwanda okukhulu kwamazinga kashukela.
Futhi, ngenkambo ende yesifo:
ukuncishiswa kwenani lezinwele, kuze kungabikho kwabo okuphelele, emilenzeni
ukwakhiwa kwe-balanoposthitis emadodeni kanye ne-vulvovaginitis kwabesifazane,
ukwehla kwe-immune immune
ukulimala kohlelo lwamathambo, okwenza umuntu abe sengozini yokuqothuka.
Kuyafaneleka futhi ukucubungula - ukukhulelwa ngohlobo lwe-1 yesifo sikashukela esiyinkimbinkimbi kuhlanganisa kakhulu inkambo ye-pathology.